कारोना : विश्वभर संक्रमितको संख्या ९९ लाख ! - Sagarmatha Online News Portal
कारोना : विश्वभर संक्रमितको संख्या ९९ लाख !
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण विश्वमा झण्डै ९९ लाख मानिस संक्रमित भएका छन् ।
विश्वभरका संक्रमितमध्ये ५३ लाख ५० हजार ९ सय जना कोरोना संक्रमित कोरोनासँगको लडाइँ जितेर घर फर्किसकेका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ९३ हजार ८ सय ५७ पुगेको छ । यीमध्ये ४ हजार ८ सय ९१ जनाले कोरोनाका कारण २४ घण्टामा ज्यान गुमाएका छन् ।
भारतमा निको भएर घर फर्किनेको संख्या २ लाख ९५ हजार पुगेको छ ।
युरोपेली देशमध्ये रसियामा सबैभन्दा धेरै संक्रमित देखिएका छन् । यस्तै बेलायत, स्पेन, इटली, जमनी र फ्रान्समा पनि कोरोना संख्या धेरै छ ।
नेपालमा कोभिड-१९ का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २७ पुगेको छ । शुक्रवार साँझसम्मको अपडेट अनुसार नेपालमा ११ हजार ७ सय ५५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।